Sina SEBIC 700C firaka vita amin'ny alim-pito 6061 mahery sy orinasa mpamokatra bisikileta elektrika | Funncycle
Haben'ny kodiarana 700 * 38C
maotera Brushless, Motor 36V 250W Mid
Laharana maodely BEF-BW700MM
filanjana 700 * 38C firaka vita amin'ny alimina 6061, nohosorana TIG
Fork Steel 700C, TIG nohosorana
notapahiny Novakiny Caliper PROMAX
kodiarana INNOVA 700 * 38C A / V Mainty
Bisikileta mody an-tanàna; Kodiarana 700C, hafainganam-pandeha 3, mainty
Ankafizo ny any ivelany sy ny tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny mitaingina bisikileta, tsy misy ny olana atrehin'ny toe-javatra toy ny fiakarana havoana hatsembohana sy ny fotoana maharitra, miaraka amin'ny SEBIC e-Bike. Ity e-bisikileta ity dia misy motera sy batery tafiditra ao anaty bisikileta. Rehefa mandeha tongotra ianao, ny motera afovoany dia mihetsika ary manome fanampiana fanampiny izay fehezinao amin'ny takelaka ankiben-tànana eo amin'ny bara fitantanana. Misy ambaratonga pedal-fanampiana dimy hafa azonao isafidianana, izay manolotra e-fanampiana hatramin'ny 20 kilaometatra isan'ora. Miankina amin'ny haavon'ny fanampiana ampiasaina, ny lanjan'ny bisikileta sy ny lalana alehanao, ny bateria dia haharitra hatramin'ny 30 kilaometatra ary hamenoana tanteraka (amin'ny fampiasana tokantrano tokana mahazatra) afaka adiny enina. Ny fomban'ny tanàna dia misy alim-bary vita amin'ny alim-bolo mateza miaraka amin'ny fork fampiatoana coil sprung, mety tsara amin'ny lalana na amin'ny lalan'ny bisikileta. Ary toy ny e-bisikileta SEBIC rehetra, ny e-bisikileta dia misy garantie 2-taona amin'ny bateria sy ny faritra fanampiana elektrika ary 5 taona fiantohana amin'ny fefy sy fork. Mandehana elektrika ary mankafiza ny fahalalahana mitaingina!
■ Fanampiana ambaratonga elektrika dimy ambaratonga raha mandeha tongotra ianao.
■ Manampy hatramin'ny 15 mph, maharitra hatramin'ny 30 kilaometatra.
■ Voafehinao tanteraka ny môtô mpanampy pedal-ateraky ny 250-watt aoriana misy mpanamory thumbpad sy seho LCD.
■ Ireo mpampisava fivoahana haingam-pandeha 3 dia manome fanovana haingana sy mazava.
■ Kodiarana 700C mifanaraka amin'ny mpitaingina 64 ka hatramin'ny 74 sentimetatra ny halavany. Fiantohana 2 taona amin'ny bateria sy ny fanampiana fanampiana herinaratra, fiantohana 5 taona amin'ny fefy sy fork.
Teo aloha: SEBIC 20 inch aluminium miafina bateria miafina mametaka bisikileta elektrika
Manaraka: SEBIC 700C batterie miafina any an-tanàn-dehibe bisikileta herinaratra